Hogaamiyihii hore ee ciidanka xoraynta Benshagul oo ka baxsaday xabsiga Assosa Horay ayaa loogu - ዜና ከምንጩ
Hogaamiyihii hore ee ciidanka xoraynta Benshagul oo ka baxsaday xabsiga Assosa Horay ayaa loogu
xukumay xabsi daa’in, waana uu baxsaday
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka xoreynta Benishangul Gumuz ayaa ka baxsaday xabsiga Asosa ee gobolka oo uu ku xirnaa taliyihii hore ee ciidanka xooga dalka Cabdulwahaab Mehad.
Cabdulwahaab oo lagu xukumay sagaal sano oo xarig ah, wuxuu baxsaday December 18, 2014.
Waxa hore loogu xukumay xabsi daa’in sannadkii 2001-dii, ka dib markii uu ka soo baxsaday xabsi ku yaalla dalka Ereteriya, lana shaqaynayey ciidammada Itoobiya.
Dabadeed, 2009, dawladda federaalka iyo dawlad-goboleedka waxay wada-hadallo nabadeed la galeen kooxdii uu hoggaaminayey, waxayna galeen Itoobiya.
Horjoogaha laftiisa ayaa la sheegay inuu ku lug lahaa weerarkii bishii June ee sanadkii 2010 lagu qaaday magaalada Assosa, kadib markii maleeshiyadiisu ay abaal-marin lacageed oo dhan 20 milyan oo dollar ka heshay dowladda oo ay kala firxadeen.
Maxkamadda Sare ee Federaalka waxay ku xukuntay 16 sano iyo lix bilood oo xarig ah.
Dhanka kale, garsooraha ayaa racfaan u gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka, waxaana xukunka lagu soo koobay sagaal sano, balse xeer ilaalinta ayaa ku khilaafay xukunka, waxaana la sheegay in shaqsiga la waayay intii ay socotay dacwadda.
Shakhsigan ayay maxkamadda sare ee federaalku ku xukuntay dhageysi dadban, waxaana la sheegay in aan loo gudbin xabsiyada kale ee federaalka ee Addis Ababa si loo mideeyo qoyska.
Maxbuuska ayaa waxaa baadi goobayay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaana lagu hayay ilaalo xooggan.
In kasta oo ciidamada Benishangul Gumuz ay hadda baadigoob ugu jiraan maxbuuskaasi, haddana meeshu waxay u dhowdahay Suudaan, ninkaasina waxaa u yaqaana waddada laga baxo iyo meesha laga soo galo, wuxuuna halganka ku jiray muddo ku dhow 20 sano, ayuu yiri.
Ka dib marka uu soo galo Suudaan, shakhsiga waxaa laga yaabaa inuu sii wado inuu ku lug yeesho falalka argagixisannimada ee la midka ah isagoo qoraya, tababaraya, beeraley, iyo ka hawlgala degmooyinka aagga Assosa.
Cabdul-wahaab wuxuu sheegay in ay dhibaato ka wadaan gobolka iyagoo tababaro u fidiyay dhalinyaro badan oo gobolka ah, wuxuuna sheegay in ka soo baxsashadiisa xabsiga ay khatar ku tahay nabadda iyo amniga deegaanka.
Taliyaha Waaxda Asluubta ee Aagga Assosa, Haaruun C/raxmaan, ayaa saaka u sheegay Addis Ababa in lix bilood ka dib markii uu xukunku dhacay, ay dacwad oogaha dawladda Faderaalka ka codsadeen in dib loo dhigo uu ahaa mid qiiro leh, isla markaana uu xabsiga uga baxsaday arrimo horumarineed.
Afar qof oo isku dambi lagu helay ayaa dhameystay xukunkooda.
Inkastoo ninkan uu xabsiga ku jiray wax ka yar kala bar sagaal sano oo uu xirnaa, haddana waxaa u suurtagashay in uu ka baxsado dacwad oogaha, kaddib markii uu dacwad oogaha uu soo gudbiyay dacwad ka dhan ah, sida uu yiri.
Wuxuu sheegay in aysan jirin maxaabiis kale oo ka baxsatay xabsiga, isagoo sheegay in ay rajeynayaan in dhawaan la soo xiro.
Wuxuu intaas ku daray in dhammaan goobaha ay xireen ciidamada ammaanka, si looga ilaaliyo in shaqsiga uu u dhoofo Suudaan, uuna rumeysan yahay in intii uu u qaxi lahaa Suudaan uu ka towbad keeni doono oo uu soo laaban doono.
Total views : 7512110